Tareenka Xawaaraha Sare ee Çorum iyo Madaarka ayaa Sugaya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia19 CorumTareenka Xawaaraha Sare ee Çorum iyo Madaarka ayaa Sugaya
16 / 03 / 2020 19 Corum, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
corum waxay sugeysaa tareenka xawaaraha sare iyo garoonka diyaaradaha
Wasiirka Turhan, oo u yimid Çorum ka dib barnaamijyadiisii ​​Samsun, wuxuu booqday goobta Kırkdilim Tunnels, oo lagu dhisay maalgalin qiyaastii 570 milyan liras ah, oo ku taal meesha loo yaqaan Kırkdilim ee ku taal jidka weyn ee Çorum-Osmancık, kaas oo ah midka ugu muhiimsan ee isku xidha Gobolka Badda Madow illaa Bartamaha Anatolia.
Si fudud ayaa loo gaabiyey wadada, oo isku xirta degmooyinka Turhan, Çorum iyo Cusmaanc Dk, Dodurga, Laçin iyo Kargı waxayna sidoo kale sameyneysaa qaybta muhiimka ah ee xadka waqooyiga-koonfur oo ka bilaabmeysa Sinop waxayna gaaraysaa Badda Mediterranean-ka iyadoo loo maro Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde. Maareeyaha guud ee Wadooyinka Abdulkadir Uraloğlu iyo mas'uuliyiinta shirkada qandaraasleyda ah ayaa helay macluumaad kusaabsan heerka 3da tune ee la dhaqan galiyay.
Turhan, oo markii dambe baaray wadada 'Çorum-Laçin Highway', oo wali socota, ayaa sidoo kale baaray dhismaha iyo goobta garoonka diyaaradaha ee ku yaal Celilkırı, kaasoo billowday 1996-kii laakiin aan weli la bixin sababta oo ah lacag la'aan awgeed.
Wasiir Turhan, halkan, wuxuu ka helay xog-hayaha Xoghayaha Gaarka ah ee Maamulka Gobollada Gaarka ah Recep Nakil iyo ku xigeenadiisa ku saabsan shaqadii hore.
Turhan, oo baadhay marin-habaabinta loo qorsheeyay in laga dhiso gobolka halkaas oo ay ku taallo Jaamacadda Hitit iyo Erol Olçok Training and Research Hospital ee ku taal Wadada weyn ee Ankara, ayaa markii dambe baaray howlaha dhismaha wadooyinka ee laga fuliyay Wadada Çorum-Ortaköy.
Sharaxa "Mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Samsun"
Turhan wuxuu bayaan u gudbiyey suxufiyiinta ka hor kulanka qiimaynta ee lagu qabtay hoteel ku yaal magaalada kadib booqashadiisa iyo baaritaankiisii ​​inorum.
Isagoo caddeeyay in Çorum uu horumar ka sameynayo aaggaga dhan, Turhan wuxuu yiri iyada oo Wasaarad ahaan, ay baarteen maalgashi laxiriira gadiidka magaalada.
Turhan, isaga oo tixraacaya horumarada tareenka xawaaraha sare ku socda oo ah midda ugu weyn ee laga filayo magaalada, wuxuu yiri:
Ourorum wuxuu sugaya tareenka xawaaraha dheer. Waxaan soo marnay marxaladi ugu dambeysay ee mashruuca tareenka xawaaraha sare laga bilaabo Ankara ilaa Samsun. Ilaa dhamaadka sanadka, waxaan bilaabeynaa diyaarinta hindisada dhameystirka mashruuca iyo howlaha dhismaha. Marka la dhammaystiro mashruuca dhammaadka sanadka, waxaan rajeynayaa inaan bilowno qandaraaska u dhexeeya Delice-Çorum-Samsun oo aan bilaabi doonno shaqo. ”
Isagoo tilmaamay in rajada ugu weyn ee ka jirta wadada tareenka ee magaalada ay tahay garoonka diyaaradaha, Turhan wuxuu yiri, “Adeeg gaadiid muhiim ah oo ay filayso Çorum waa mashruuca garoonka diyaaradaha oo bilaabay 2000-meeyadii laakiin laga saaray barnaamijka maalgashiga. Waxaan ku aragnay oo baarnay tan tan isla goobta. Kadib markii mashruucan la cusbooneysiyo oo ku saabsan meeshan, waxaan qorsheyneynaa inaan ku galno barnaamijka maalgashiga waxaanan rajeyneynaa in garoonkayaga loo keeno Çorum. ” aqoontiisa la wadaago.
Wasiirka Turhan wuxuu caddeeyey in bixinta adeeggan ay siiso Çorum, oo warshadeeda, ganacsigeeda iyo gaar ahaan dhoofinta ay ka sarreeyaan gobollada kale, waa deynta dowladooda, wuxuuna sii waday sida soo socota:
Nasiib wacan Mashruuc garoonka diyaaradaha ayaa la fuliyay horraantii 2000-meeyadii, iyada oo si dhab ah loosoosaaray 24,17 boqolkiiba. Dhinacyada garoonka diyaaradaha ayaan ku filnayn inay daboolaan baahiyaha maanta ee Çorum. Madaarka waa 30 mitir ballaadhkiisuna waa 2 kun 10 mitir. Waxaan rabnaa inaan ka dhigno garoonka diyaaradaha cusub shuruudaha hadda jira. Asxaabteena ayaa mar kale baari doona cabbirkooda isla goobta. Amarka waxaan siiyay Maamulaha Guud. Markaan la dhameeyo, waxaan ku dari doonnaa barnaamijka maalgashiga waxaanna ku wadnaa hawsha howsha. Annagu kama tagin wax ballanqaad ah oo aan u sameynay qarankeena.
Turhan wuxuu sharraxayaa in Wadooyinka 'Kırkdilim Tunnels' ee laga dhisay Wadada Çorum-Cuscık, taas oo ah mid ka mid ah jidadka ugu muhiimsan ee isku xira Gobolka Badda Madoow iyo Bartamaha Anatolia, maalgashiga qiyaastii 570 milyan oo lira ah, la dhameystiri doono oo la furi doono taraafikada sannadka dambe, meelaha qaarkoodna taraafikada ay ku urursan yihiin Çorum. Wuxuu sheegay in isgoysyada leh buundooyinka la dhisi doono.
Turhan ayaa markaa kadib qabtay shir qiimayn xirxiran oo ay ka soo qeyb galeen maamulka Mustafa Governoriftçi, AK Party Deporum kuxigeenka Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya iyo Erol Kavuncu, Duqa magaalada Halil İbrahim Aşgın iyo xafiisyada xafiisyada.
Ololaha Saxeexa ee Ankara Corum Samsun Khadka Xawaaraha Sare
Samsun Corum Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara waa in la geeyaa Barnaamijka Maalgalinta 2013
Samsun-Corum-Kırıkkale waxay shaqeyneysaa tareenka xawaaraha sare ee sanadkan
Miisaaniyadeedka 10 TL ee loo qoondeeyey khadka tareenka xawaaraha sare ee Kirikkale-Corum-Samsun
Mashruuca Tikidhada Xawaaraha Sare ee Kirkukaale-Corum-Samsun ee barnaamijka maal-galinta 2015